Sida Aad Mobil kaaga Ugu Qancin Karto Gacaliyahaaga Ama Gacalisadaada - Daryeel Magazine
Sida Aad Mobil kaaga Ugu Qancin Karto Gacaliyahaaga Ama Gacalisadaada
Maanta qofkasta wuxuu haystaa mobil, laakiin ma ku isticmaalno masejka inaan ku raaligalino dadka aan jecelnahay xaaskayga / ninkayga iwm markay caroodaan.
Igahoo kalmado aad ku oran kartid:
–Waxaan leeyahay qalbi aan qalafsanayn oo aan kugu daawan karayn carada, caqli aan iloobin wanaagaaga iyo jaceelkaaga..waxaan leeyahay qof aan jecelahay la’aantiina aanan waxba ahayn ..caradiisana aanan xamili karayn.
–Hadaad carootid waan ku raali galin aanoo kuu dhiibaya cumrigayga hadaan caroodo kaama caroodo adigoo ah qaaligii hadaad amartid ruuxdayda waxaad arki inay ku maslaxayso hadaad amartid indhahayga sakan gudahood ayay kuugu iman.ee bas ka dheh oo naftayda ha ku dilin caradaada.
–Laabtaydu way diiqadoon hadaad iga tagtid..ruuxdayda ayaad ciriiri galisay hadaad iga carootid..waanan dhiman hadaad qarkayga jeclaatid.
–Iisoo dabac xabiibi oo ila hadal qalbigaygu wuu xanuusaday..imaqashii codkaaga kaliya aan boogsadee.daawadaydu waa adoo carada daaya oo iisoo noqda.
-Ha caroon oo ha dhibin dareenkayga laabtaada wax xun ha galin anoo laabta wanaag kuugu haya waan ku raali galin si nolosheenu ubax u noqoto, aniga iyo adiga ma kala maarannee soo dabac oo sidaadi ku soo noqo, la aantaa waa aduunka oo qorax la aan ah.
Sida Ugu Fiican Ee Aad Ku Garan Karto In Ilmahaaga Uu Hayo Madax Xanuunka Dhan-Jafka Ah 5 Tallaabo Oo Aad Kusoo Jiidan Karto Qofka Aad Jeceshahay Hababka Ugu Fudud Ee Aad Ku Ogaan Ogaan Karto Hibooyinka Alle Kugu Mannaystay Ee Kaa Qarsoon Calaamado Cadeyn u ah inaad Waqti Badan ku Lumisay Mobile-kaaga, Qabatina aad ku Noqotay